SITAGU SAYADAW | MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA
>MAN OF THE BLOG (For Saving Cyclone Nargis Victims of Burma) May 6, 2009
MAN OF THE BLOG (For Saving Cyclone Nargis Victims of Burma)
>Ayarwaddy Sitagu Contribution Diary (09-06-2008 to 09-12-2008) April 3, 2009
Do you fail to remember NARGIS VICTIMS? November 1, 2008
Filed under: MASOEYEIN MONASTERY,NARGIS CYCLONE,SITAGU SAYADAW — Nyo Gyi @ 10:00 am
ခြောက်လပြည့် နာဂစ် (သို့မဟုတ်)
(ရရှိထားသော နာဂစ်ကယ်ဆယ်ရေးနှိုးဆော်လွှာအား ပြန်လည် ဖြန့်ဝေပါသည်)
၀ါတွင်းကာလ ကင်းလွတ်ပြီဖြစ်သဖြင့် နာဂစ်ဒေသများသို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားရောက်ကူညီမည့် ဆရာတော်များဦးဆောင်သည့် နာဂစ်လေဘေးကူညီရေးအဖွဲ့များလည်း
ဆရာတော်၊ သံဃာတော်များဦးဆောင်သည့် နာဂစ်လေဘေး ကူညီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့အစည်များထံသို့
နာဂစ်ဒုက္ခသည်များအတွက် ကူညီမှုများ ဆက်လက် ပေးပို့ကြပါရန်
ကရုဏာတရား ရှေ့ထား၍ နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
180 days after Cyclone Nargis: Relief efforts on track but support is still needed (UNICEF)
>Do you fail to remember NARGIS VICTIMS?
Do you fail to remember NARGIS VICTIMS?